foods and habits that can endanger man fertility - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
foods and habits that can endanger man fertility
လှဲမှားအစားအသောကျနှငျ့ အလအေ့ကငျြ့ဆိုးမြားမှ အမြိုးသားမြားအတှကျ စိုးရိမျစရာ မြိုးပှားမှုပွသနာ
“လူတိုငျး လူတိုငျးမှာ.. အယျ့လယျ” …. ခုခတျေစားနတေဲ့ စကားလေးနဲ့ ပွောပွရရငျ “လူတိုငျး လူတိုငျးမှာ.. အျောရယျဂငျြနယျ အစားအသောကျ အမူအကငျြ့ နထေိုငျပုံ ဒီဇိုငျးကာလာ အမြိုးမြိုး ” ရှိကွတယျပေါ့…. သို့သျော တခြို့သော အစားအသောကျတှနေဲ့ နထေိုငျမှုပုံစံတှေ မှားယှငျးတဲ့အခါ ကနျြးမားရေး ပွသနာတှေ ကွုံတှရေ့တတျပါတယျ..ဒီထဲကမှ အမြိုးသားမြားအတှကျ စိုးရိမျစရာ မြိုးပှားမှုပွသနာနဲ့ ဆိုငျတဲ့ lifestyle အကွောငျးလေး ပွောပွခငျြပါတယျ…
ကဖငျးဓာတျမြားလှနျးတဲ့ ကျောဖီတှေ မသောကျပါနဲ့
– တနျဆေး လှနျ ဘေး ဆိုသလို .. နစေ့ဉျ ပုံမှနျ တဈခှကျလောကျ သောကျခွငျးက မထိခိုကျနိုငျပမေယျ့.. ကဖငျးဓာတျမြားတာပဲ သောကျတယျ.. နှဈခှကျ သုံးခှကျလညျး မကဘူးဆိုပါက ရှရေညျမှာ မြိုးပှားမှုကို ထိခိုကျနိုငျပါတယျ…ဒါကွောငျ့ တခွားသောfresh juice တှေ အစားထိုးသောကျတာဟာ ကနျြးမာရေးအတှကျ ပိုကောငျးမှနျသလို ခန်ဓာကိုယျအတှကျ လိုအပျသော vitamin အခြိုကိုလဲ ရရှိနိုငျပါတယျ…
အစားအသောကျ ကွူးခွငျးနှငျ့ .. junk foods လိုချေါတဲ့ burger ၊ အာလူးခြောငျးကွျော ၊ fast foodsတှေ ခဏခဏစားခွငျး
– အစားအသောကျခုံမငျလာတဲ့အခါ ၊ အလငျြအမွနျရတဲ့အစားအသောကျတှေ စားတဲ့အခါမှာ. weight ပိုတကျလာမယျ… တကျလာတဲ့ ဝိတျနဲ့ အညီ မြိုးပှားမှုကိုလညျး ပိုမိုထိခိုကျလာစနေိုငျပါတယျ…အခြို့ junk foodတှဟော သှေးတှငျးအခြိုဓာတျကို ပိုတကျစနေိုငျပွီး အငျဆူလငျနဲ့ မြိုးပှားမှုဟာလညျး ဆကျစပျမှုရှိနတောမို့ လြော့စားသငျ့ပါတယျ…ဒါကွောငျ့ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျသော အစားအသောကျတှကေို စားသုံးသငျ့ပါတယျ…
အရကျ ဘီယာ လြော့ သောကျပါ
– တခြို့သူတှေ ပွောနိုငျတာက”ဒီခတျေကွီးမှာ လူမှုရေးအရ ဖွဈစေ … စိတျပငျပနျးမှု ဖွလြေေ့ာဖို့ ဖွဈစေ… အသောကျအစားနဲ့ ဘယျကငျးနိုငျပါ့မလဲ..” occasional drinker ” ချေါ အပေါငျးအသငျးကွောငျ့ စီးပှားရေး လူမှုရေးကွောငျ့ တဈခါတဈရံသောကျတတျတဲ့သူဟာ မထိခိုကျနိုငျပါဘူး…သို့သျော သငျဟာ နစေ့ဉျ ညနတေိုငျး အရကျဘီယာ သောကျသူ ဖွဈပါက တဈပတျမှာ နှဈရကျ သုံးရကျသာ သောကျဖွဈအောငျ ပွုပွငျပါ.. အရကျ မသောကျသောသူရဲ့ သုတျပိုးအရအေတှကျ 37 %ဟာ ပုံမှနျဖွဈပွီး အရကျသောကျသူမှာဆို 12%လောကျပဲ ပုံမှနျ ဖွဈတာကို တှရေ့ပါတယျ(p.s အမြိုးသားတဈယောကျ ထုတျလှတျလိုကျတဲ့ သုတျပိုး100%လုံးဟာ ပုံမှနျမဟုတျပါ) .. ဒါကွောငျ့ အရကျသောကျခွငျးဟာ မြိုးပှားမှုကို ထိခိုကျစနေိုငျကွောငျး သိသာပါတယျ…
– ဆေးလိပျသောကျခွငျးဟာလညျး သုတျပိုးရဲ့ အရညျအသှေးကို လြော့ကစြပွေီး ဟျောမုနျးပွောငျးလဲမှုကိုပါ ဖွဈစတေဲ့အတှကျ မသုံးစှဲသငျ့ပါ…အရကျဆေးလိပျဆိုတာ.. စှဲတတျတယျ.. ဖွတျရခကျတယျလို့ ဆိုကွပါလိမျ့မယျ.. သို့သျော မိမိမှာ အမှနျတကယျ ဖွတျခငျြစိတျရှိပါက မိမိကိုယျကို ယုံကွညျပါ… ဆရာဝနျနှငျ့ဆှေးနှေးတိုငျပငျပါ…ဒီလိုအားဖွငျ့.. မိမိသကျတမျးဟာ ပိုရှညျနိုငျသလို မိသားစုဘဝအတှကျကိုလညျး ပိုမိုအခြိနျပေး ဂရုစိုကျနိုငျပွီး သူတဈပါးအားကလြေးစားရတဲ့သူ (role model)တောငျ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ
အိပျရာဝငျ နောကျကခြွငျး၊ အိပျခြိနျ ပုံမှနျမရှိခွငျး
– လှဲမှားတဲ့ အိပျခြိနျတှေ အလအေ့ကငျြ့တှကွေောငျ့ ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျတကျတာတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ.. ပွောခဲ့သလို ကိုယျအလေးခြိနျတကျခွငျးဟာ မြိုးပှားမှုကို ထိခိုကျနိုငျပါတယျ…မိမိကွိုကျသော ဇာတျလမျး၊ ဂိမျးတှကေို စှဲလမျးနခွေငျးကွောငျ့ အိပျရာဝငျနောကျကတြာမြိုး ဖွဈနပေါက တတျနိုငျသလောကျ လြော့ခပြါ.. ပုံမှနျ အိပျခြိနျ ရှိခွငျးဖွငျ့ မိမိ၏ ကနျြးမာရေးကို ဂရုစိုကျပါ…
လုံခွုံမှုကငျးသော၊ အကာအကှယျမဲ့သော လိငျဆကျဆံခွငျး
– အကှာအကှယျမပါပဲ လိငျဆကျဆံခွငျးကွောငျ့ မိမိဆီမှာ လိငျမှာ တဆငျ့ ရောဂါပိုးမြား ကူးစကျလာခဲ့ပါက မြိုးပှားမှုကို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ.. အမြိုးသားတှမှော ဒီလို ရောဂါဖွဈပါက လက်ခဏာတှဟော စောလငျြစှာ ပွတတျတာမို့ သိရငျ သိခငျြး အမွနျကုသသငျ့ပါတယျ…
အစားမတျော တဈလုပျ ၊ အသှားမတျော တဈလှမျးမို့.. မှားယှငျးတဲ့ lifestyle တခြို့ကွောငျ့ ကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျစနေိုငျပါမို့.. အရာရာမှာ သတိရှိသငျ့ပါတယျ…
ကနျြးမာရေး အသိကွောငျ့ လူ့ဘဝ ပိုမိုမွငျ့မားတိုးတကျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးမတ်ေတာပွုလကျြ….
လွဲမှားအစားအ​သောက်​နှင့်​ အ​လေ့အကျင့်​ဆိုးများမှ အမျိုးသားများအတွက်​ စိုးရိမ်​စရာ မျိုးပွားမှုပြသနာ
“လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ.. အယ့်​လယ်​” …. ခု​ခေတ်​စား​နေတဲ့ စကား​လေးနဲ့ ​ပြောပြရရင်​ “လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ.. ​အော်​ရယ်​ဂျင်​နယ်​ အစားအ​သောက်​ အမူအကျင့်​ ​နေထိုင်​ပုံ ဒီဇိုင်းကာလာ အမျိုးမျိုး ” ရှိကြတယ်​​ပေါ့…. သို့​သော်​ တချို့​သော အစားအ​သောက်​​တွေနဲ့ ​နေထိုင်​မှုပုံစံ​တွေ​ မှားယွင်းတဲ့အခါ ကျန်းမား​ရေး ပြသနာ​တွေ ကြုံ​တွေ့ရတတ်​ပါတယ်​..ဒီထဲကမှ အမျိုးသားများအတွက်​ စိုးရိမ်​စရာ မျိုးပွားမှုပြသနာနဲ့ ဆိုင်​တဲ့ lifestyle အ​ကြောင်း​လေး ​ပြောပြချင်​ပါတယ်​…
ကဖင်းဓာတ်​များလွန်းတဲ့ ​ကော်​ဖီ​တွေ မ​သောက်​ပါနဲ့
– တန်​​ဆေး လွန်​ ​ဘေး ဆိုသလို .. ​နေ့စဉ်​ ပုံမှန်​ တစ်​ခွက်​​လောက်​ ​သောက်​ခြင်းက မထိခိုက်​နိုင်​​ပေမယ့်​.. ကဖင်းဓာတ်​များတာ​ပဲ ​သောက်​တယ်​.. နှစ်​ခွက်​ သုံးခွက်​လည်း မကဘူးဆိုပါက ​ရှေရည်​မှာ မျိုးပွားမှုကို ထိခိုက်​နိုင်​ပါတယ်​…ဒါ​ကြောင့်​ တခြား​သောfresh juice ​တွေ အစားထိုး​သောက်​တာဟာ ကျန်းမာ​​ရေးအတွက်​ ပို​ကောင်းမွန်​သလို ခန္ဓာကိုယ်​အတွက်​ လိုအပ်​​သော vitamin အချိုကိုလဲ ရရှိနိုင်​ပါတယ်​…
အစားအ​သောက်​ ကြူးခြင်းနှင့်​ .. junk foods လို​ခေါ်တဲ့ burger ၊ အာလူး​ချောင်း​ကြော်​ ၊ fast foods​တွေ ခဏခဏစားခြင်း
– အစားအ​သောက်​ခုံမင်​လာတဲ့အခါ ၊ အလျင်​အမြန်​ရတဲ့အစားအ​သောက်​​တွေ စားတဲ့အခါမှာ. weight ပိုတက်​လာမယ်​… တက်​လာတဲ့ ဝိတ်​နဲ့ အညီ မျိုးပွားမှုကိုလည်း ပိုမိုထိခိုက်​လာ​စေနိုင်​ပါတယ်​…အချို့ junk food​တွေဟာ ​သွေးတွင်းအချိုဓာတ်​ကို ပိုတက်​​စေနိုင်​ပြီး အင်​ဆူလင်​နဲ့ မျိုးပွားမှုဟာလည်း ဆက်​စပ်​မှုရှိ​နေတာမို့ ​လျော့စားသင့်​ပါတယ်​…ဒါ​ကြောင့်​ ကျန်းမာ​ရေးနဲ့ ညီညွတ်​​သော အစားအ​သောက်​​တွေကို စားသုံးသင့်​ပါတယ်​…
အရက်​ ဘီယာ ​လျော့ ​သောက်​ပါ
– ​တချို့သူ​တွေ ပြောနိုင်​တာက”ဒီ​ခေတ်​ကြီးမှာ လူမှု​ရေးအရ ဖြစ်​​စေ … စိတ်​ပင်​ပန်းမှု ​ဖြေ​လျေ့ာဖို့ ဖြစ်​​စေ… အ​သောက်​အစားနဲ့ ဘယ်​ကင်းနိုင်​ပါ့မလဲ..” occasional drinker ” ​ခေါ် အ​ပေါင်းအသင်း​ကြောင့်​ စီးပွား​ရေး လူမှု​ရေး​ကြောင့်​ ​တစ်​ခါတစ်​ရံ​သောက်တတ်​တဲ့သူဟာ မထိခိုက်​နိုင်​ပါဘူး…သို့​သော်​ သင်​ဟာ ​နေ့စဉ်​ ည​နေတိုင်း အရက်​ဘီယာ ​သောက်​သူ ဖြစ်​ပါက တစ်​ပတ်​မှာ နှစ်​ရက်​ သုံးရက်​သာ ​သောက်​​ဖြစ်​​အောင်​ ​ပြုပြင်ပါ.. အရက်​ မ​သောက်​​သောသူရဲ့ သုတ်​ပိုး​အ​ရေအတွက်​ 37 %ဟာ ပုံမှန်​ဖြစ်​ပြီး အရက်​​သောက်​သူမှာဆို 12%​လောက်​ပဲ ပုံမှန်​ ဖြစ်​တာကို ​တွေ့ရပါတယ်​(p.s အမျိုးသားတစ်​​ယောက်​ ထုတ်​လွှတ်​လိုက်​တဲ့ သုတ်​ပိုး100%လုံးဟာ ပုံမှန်​မဟုတ်​ပါ) .. ဒါ​ကြောင့်​ အရက်​​သောက်​ခြင်းဟာ မျိုးပွားမှုကို ထိခိုက်​​စေနိုင်​​ကြောင်း သိသာပါတယ်​…
– ​ဆေးလိပ်​​သောက်​ခြင်းဟာလည်း သုတ်​ပိုးရဲ့ အရည်​အ​သွေးကို ​လျော့ကျ​စေပြီး ​ဟော်​မုန်း​ပြောင်းလဲမှုကိုပါ ဖြစ်​​စေတဲ့အတွက်​ မသုံးစွဲသင့်​ပါ…အရက်​​ဆေးလိပ်​ဆိုတာ.. စွဲတတ်​တယ်​.. ဖြတ်​ရခက်​တယ်​လို့ ဆိုကြပါလိမ့်​မယ်​.. သို့​သော်​ မိမိမှာ အမှန်​တကယ်​ ဖြတ်​ချင်​စိတ်​ရှိပါက မိမိကိုယ်​ကို ယုံကြည်​ပါ… ဆရာဝန်​နှင့်​​ဆွေး​နွေးတိုင်​ပင်​ပါ…ဒီလိုအားဖြင့်​.. မိမိသက်​တမ်းဟာ ပိုရှည်​နိုင်​သလို မိသားစုဘဝအတွက်​ကိုလည်း ပိုမိုအချိန်​​ပေး ဂရုစိုက်​နိုင်​ပြီး သူတစ်​ပါးအားကျ​လေးစားရတဲ့သူ (role model)​တောင်​ ဖြစ်​လာနိုင်​ပါတယ်​
အိပ်​ရာဝင်​ ​နောက်​ကျခြင်း၊ အိပ်​ချိန်​ ပုံမှန်​မရှိခြင်း
– လွဲမှားတဲ့ အိပ်​ချိန်​​တွေ အ​လေ့အကျင့်​​တွေ​ကြောင့်​ ခန္ဓာကိုယ်​အ​လေးချိန်​တက်​တာ​တွေ ဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်​.. ​ပြောခဲ့သလို ကိုယ်​အ​လေးချိန်​တက်​ခြင်းဟာ မျိုးပွားမှုကို ထိခိုက်​နိုင်​ပါတယ်​…မိမိကြိုက်​​သော ဇာတ်​လမ်း၊ ဂိမ်း​တွေကို စွဲလမ်း​နေခြင်း​ကြောင့်​ အိပ်​ရာဝင်​​နောက်​ကျတာမျိုး ဖြစ်​​နေပါက တတ်​နိုင်​သ​လောက်​ ​လျော့ချပါ.. ပုံမှန်​ အိပ်​ချိန်​ ရှိခြင်းဖြင့်​ မိမိ၏ ကျန်းမာ​ရေးကို ဂရုစိုက်​ပါ…
လုံခြုံမှုကင်းသော၊ အကာအကွယ်​မဲ့​သော လိင်​ဆက်​ဆံခြင်း
– အကွာအကွယ်​မပါပဲ လိင်​ဆက်​ဆံခြင်း​ကြောင့်​ မိမိဆီမှာ လိင်​မှာ တဆင့်​ ​ရောဂါပိုးများ ကူးစက်​လာခဲ့ပါက ​မျိုးပွားမှုကို ထိခိုက်​​စေနိုင်​ပါတယ်​.. ​အမျိုးသား​တွေမှာ ဒီလို ​ရောဂါဖြစ်​ပါက လက္ခဏာ​တွေဟာ ​စောလျင်​စွာ ပြတတ်​တာမို့ သိရင်​ သိချင်း အမြန်​ကုသသင့်​ပါတယ်​…
အစားမ​တော်​ တစ်​လုပ်​ ၊ အသွားမ​တော်​ တစ်​လှမ်းမို့.. မှားယွင်းတဲ့ lifestyle တချို့​ကြောင့်​ ကျန်းမာ​ရေးကို ထိခိုက်​​စေနိုင်​ပါမို့.. အရာရာမှာ သတိရှိသင့်​ပါတယ်​…
ကျန်းမာ​ရေး အသိ​ကြောင့်​ လူ့ဘဝ ပိုမိုမြင့်​မားတိုးတက်​ကြပါ​စေလို့ ဆု​တောင်း​မေတ္တာပြုလျက်​….